Blackjack 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka Blackjack-online.app
I-Blackjack ngumdlalo odlalwa ngamakhadi kumakhasino futhi ungadlalwa ngamakhonksi ayi-1 kuye kwayi-8 wamakhadi angama-52, lapho inhloso ukuba namaphoyinti amaningi kunalowo ophikisana naye, kepha ngaphandle kokudlula ama-21 (uma ulahlekelwa). Umthengisi angafika kuphela kumakhadi ayi-5 noma kufika ku-17.
I-Blackjack: ungadlala kanjani igxathu negxathu? 🙂
Ukudlala i-Blackjack online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
I-Paso 1. Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yomdlalo Emulator.ku-inthanethi.
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukudlala.
Isinyathelo se-4. Sondela ngangokunokwenzeka ku-21.
Isinyathelo se-5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza "Qala kabusha" ukuqala phansi.
I-Blackjack ingenye yemidlalo yamakhadi edume kakhulu emhlabeni. Umdlalo uwukuthi elula, enembile futhi noma ngubani angayidlala. I-Blackjack ingadlalwa ngezindawo eziningi ezisukela ku-1 kuye ku-8, ngamakhadi angama-52 lilinye. Ngaphezu kwalokho, kunenketho yokudlala i-blackjack online.
Inhloso yalo mdlalo ilula: kuzuzwe amaphuzu aphezulu kakhulu, ngaphandle kokudlula amaphuzu angama-21. Ukufeza le nhloso, umdlali ekuqaleni uthola amakhadi amabili, kepha angacela amanye ngesikhathi somdlalo.
Amaphuzu aphezulu kakhulu abizwa ngeBlackjack, yingakho umdlalo unaleli gama elimnandi.
IBlackjack, njengoba sazi, ivele emidlalweni ehlukene yekhulu le-XNUMX eyayidlalwa eYurophu. Iningi lale midlalo lalinento eyodwa efanayo: inhloso bekuwukufika ku-21.
Ukubhekiswa kokuqala kwale midlalo kwenziwa ku- 1601 futhi ukhona emsebenzini kaMiguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Le noveli isitshela ngempilo nokuzisola ngezindlamlenze ezimbili zaseSevillian zeGolden Age, ezinekhono kakhulu ekudlaleni umdlalo obizwa nge- "Ventiuno".
Uhlobo lwesiFulentshi Umdlalo 21 uhlukile, ngoba umthengisi angabheja kabili futhi abadlali babheje njalo ngemuva komjikelezo ngamunye.
Ngalokho, Uhlobo lwesiNtaliyane, ehamba ngegama elithi Seven and Half, iyavuma ukuthi umdlalo uzodlalwa ngamakhadi obuso kanye nezinombolo 7, 8 no-9. Umdlalo wehluka kunguqulo yase-Italy ngoba, njengoba igama lisho, inhloso bekuzofinyelela amaphuzu ayisikhombisa nohhafu. Ngokusobala, uma abadlali beqa amamaki ayisikhombisa nohhafu, bayahlulwa.
A IMelika yeza ngemuva kweFrance Revolution, futhi ekuqaleni bekungadumile kangako emigedeni yokugembula. Ukuheha abadlali kulo mdlalo, abanikazi banikela ngamabhonasi ahlukahlukene. Izinketho ezithandwa kakhulu zibandakanya uhlelo lokukhokha lwe-10-to-1, lwesandla nge-ace yama-spade ne-blackjack. Leso sandla sabizwa ngeBlackjack, okunika lo mdlalo igama lawo.
I-Blackjack ngumdlalo oneziguquko eziningi ngaphakathi kwamakhasino ngokwawo. Lapha sethula ukwehluka okuyinhloko okusetshenziswe kakhulu:
Ukuhluka okufana kakhulu nokwasekuqaleni, kudlalwa ngokujwayelekile nge- 6 kuya ku-8 onezitezi zamakhadi angama-48.
Noma kunjalo, lapha Kungenzeka ukuphinda kabili noma iliphi inani lamakhadi, njengoba nje kungenzeka ukushaya elinye ikhadi ngemuva kokukhipha ama-aces.
NgeSpanishi 21, iBlackjack yomdlali ihlale ishaya eyomthengisi.
I-Multi-hand Blackjack idlalwa ngendlela efanayo neBlackjack ejwayelekile futhi ivame ukuvela kumakhasino aku-inthanethi njengoba ivumela umdlali ukuthi abe kufika ezandleni ezi-5 ezahlukahlukene ngesikhathi somdlalo ofanayo.
Lokhu kwehluka kudlalwa ngamadokodo ama-5 ngasikhathi sinye.
Le nguqulo idlalwa ne- Amakhadi angama-52 futhi ungahlala ucela ukusonga umdlalo wakho ku-9 noma ku-Ace. Kodwa-ke, kule nguqulo uma umthengisi ene-Blackjack, ulahlekelwa ukubheja kwakhe konke.
IBlackjack switch ikunikeza ezinye izinto ezingabekwa njengokukhohlisa emdlalweni wekhadi ojwayelekile.
Noma kunjalo, lokhu kwehluka kwenziwa ngamadokodo ayisithupha kuya kwangu-6, abadlali bahlala njalo benezandla ezimbili ezihlukile, amakhadi abhekiswa ubuso nobuso futhi abadlali bangashintshisana ngamakhadi ezandla.
I-Las Vegas Strip
I-Vegas Strip kungenye ukwehluka Blackjack futhi udlalwa nge onezitezi 4 amakhadi 52. Lapha umthengisi uphoqelekile ukuthi ame uma inqwaba yamakhadi akhe ingu-17.
Futhi, umdlali angasusa amakhadi amabili okuqala bese ephinda esebenzisa izandla zakhe.
Manje sesiyazi ukuthi i-blackjack iyini nemibono yayo eyisisekelo, kepha ngaphambi kokudlala i-blackjack ekhasino elisuselwa ezweni noma online, kufanele ufunde futhi ufunde kahle Imithetho ye-blackjack. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uzizwe ukhululeke ngokwengeziwe phakathi kwesipiliyoni sakho sokuqala sokudlala futhi nomdlalo uvele ngokushesha okukhulu kubo bonke abadlali abasetafuleni lakho.
IBlackJack ngumdlalo wamasu, odlalwa etafuleni elihlangene lapho abadlali abaningi bengadlala khona, kepha ngamunye uncike isu labo futhi udlala ngawodwana noMthengisi.
Inhloso yomdlali ngamunye ukwenza ama-21 noma ukuthola isandla sakhe sisondele kuma-21 ngangokunokwenzeka.Umdlali noma umthengisi wenza iBlackJack lapho amakhadi abo amabili okuqala kungu-Ace no-10 (ikhadi le-Ace + 10, noma ikhadi le-Ace plus).
Qala ukudlala 🖤
IBlackJack Ngokuvamile kudlalwa ngezitezi eziyisi-6 zamakhadi ngasikhathi sinye ezishova phakathi komdlalo ngamunye.
Ku umzuliswano wokuqala amakhadi abhekiswe kubadlali abhekelwa phezulu, ngaphandle kwekhadi lokuqala lomthengisi elibhekiswe phansi.
Lapho ikhadi lesibili lokudlala selibhekiwe, wonke amakhadi abhekiswa abhekane ngqo futhi yinani lekhadi lomthengisi elizothonya zonke izinqumo ezizothathwa ngabadlali maqondana nomdlalo.
Inani lamakhadi omthengisi kumele lihlale likhona ngenhla kwe-17Ngamanye amagama, uma amakhadi amabili okuqala omthengisi enenani elingaphansi kuka-17, kufanele adwebe amakhadi amaningi aze afinyelele okungenani ku-17 futhi afike kuma-21.
Uma umthengisi enza okungaphezu kwama-21, uyahlola, futhi bonke abadlali bayaphumelela. Uma kwenzeka ukuthi umthengisi abeke inani eliphakathi kuka-17 no-21, abadlali abanenani eliphakeme bawina, babopha abadlali ngenani elifanayo futhi abadlali abanenani eliphansi kunalokho umthengisi alahlekelwa ukubheja kwabo.
IBlakJack ikhokha u-2 kuye ku-1, kepha uma umdlali enza iBlackJack uwina u-3 kuye ku-2. Uma uMthengisi weBlackJacks, uwina izandla zonke etafuleni, ngisho nalabo abanenani elingu-21. Lapho umdlali noMthengisi weBlackJack, kubhekwa njengothayi futhi akukho nkokhelo.
Imvamisa uzothola imininingwane etafuleni ngalinye le-blackjack elikhombisa ubuncane nemikhawulo yokubheja yalelo tafula. Uma umkhawulo wetafula ukhombisa u- € 2 - € 100, lokhu kusho ukuthi ukubheja okuphansi kungu- € 2 kanti ukubheja okuphezulu kungama- € 100.
Inani lekhadi le-Blackjack
Ikhadi ngalinye elibhalwe kusuka ku-2 kuye ku-10 linenani lobuso (elilingana nenombolo yekhadi)
AmaJacks, izindlovukazi namakhosi (izibalo) anenani lamaphoyinti ayi-10.
I-Ace ibiza iphuzu eli-1 noma amaphuzu ayi-11, ekukhetheni komdlali kuye ngesandla sakhe nenani elithandeka kakhulu kuye. Lapho kudlalwa iBlackJack online, isoftware ithatha inani le-Ace elizuzisa kakhulu umdlali.
Akunandaba nokwehluka kwalo mdlalo, izinhlobo zokunyakaza ziyefana kuzo zonke.
Hay Izinhlobo ezi-5 ukunyakaza okuhlukile.
Hamba (misa) Njengoba igama liphakamisa, umdlali wenelisekile ngesandla sakhe futhi akasafuni ukuthola amanye amakhadi.
Hit: kwenzeka lapho umdlali efuna ukuthola elinye ikhadi.
Kabili: Uma umdlali ezwa ukuthi udinga ikhadi elilodwa elengeziwe (elilodwa kuphela), angacela ukuthi ukubheja kwakhe kuphindwe kabili futhi athole elinye ikhadi. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi le nketho inganikezwa kuphela kumakhadi amabili okuqala owatholayo.
Hlukanisa: Uma amakhadi amabili okuqala atholwe ngumdlali anenani lephuzu elifanayo, angakhetha ukuwahlukanisa abe yizandla ezimbili ezihlukene. Kulokhu, ikhadi ngalinye lizoba ikhadi lokuqala lesandla esisha. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka futhi ukubeka ukubheja okusha (inani elilingana nenani lokuqala) lalesi sandla esisha.
Yeka: Kukhona amakhasino avumela umdlali ukuthi asonge ngemuva kokuthola amakhadi amabili okuqala. Kodwa-ke, kulokhu uhlala ulahlekelwa yi-50% yenani oqale ukubheja.